Xukuumadda Soomaaliya oo dadka fataahada ay saameysay ugu deeqday 1 milyan oo dollar – Kalfadhi
Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaacisay in lacag gaareysa 1 Milyan oo dollar ay ugu deeqday dadku ay fatahaadahu saameyen,sida ay qortay wakaaladda Wararka SONNA.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya,Mahdi Maxamed Gulled ayaa sheegay in ay tahay in guud ahaan ummadda Soomaaliyeed u istaagan caawinta dadka ay fatahaaduhu saameyen.
‘’ Si aan ugu dhiirigelino shacabkeenna Soomaaliyeed in ay ka qeyb qaatan taakuleynta dadkooda dhibaateysan,waxaanu ka xukuumad ahaan kaga qeyb qaadaneynaa 1 milyan oo dollar oo aan ku taagereyno dadka ay saameyen fatahaaduhu,’’ayuu yiri ra’iisul wasaare ku xigeenka.
Dhinaca maamulka gobolka Banaadir ayaa billaabay gurmad lacag gaareysa 100 kun oo dollar loogu urruurinayo dadka ay fatahaadu dhibaateysay.
Ku dhawaad 300 oo kun oo qoys ayaa ka barakacay kaliya magaalada Beledweyne toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii uu magaalada ku fatahay webiga Shabeelle,sida ay sheegen madaxda maamulka Hirshabeelle.